गरिमा – मझेरी डट कम
by प्रमोद प्याकुरेल
एकांकी १३ – दाइजो
युग उचाल्ने अक्षरकर्मीको अवसान (नाटक/एकाङ्कीसङ्ग्रह)
(निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलको कार्यकक्ष । प्रिन्सिपल आफ्नो कुर्सीमा विराजमान छन् । नयाँ नियुक्ति हुन लागेका विज्ञान शिक्षक दीपेश सोही कक्षाको एकापट्टि छन् । टेबलमा ठूलो ग्लोब छ । घरिघरि प्रिन्सिपल ग्लोब घुमाउँछन् ।
म भित्र मच्चिरहेको द्वन्दको लिङ्गे पिङ्गलाई देख्ने कसले ? म भित्र निरन्तर गईरहेको पहिरोलाई बुझ्ने कसले ? न कसैको सामु देखाउन सक्छु , न त ब्यक्त नै गर्न सक्छु । म कुन मानसिक अवसाद बाट गुज्रिरहेछु भन्ने आभास बाट बेखवर मेरा परिवारले मेरो विवाहको लागि दबाव दिरहेकाछन् र केटीका फोटोहरू हर्नका लागि कर गरिरहेकाछन् ।
भर्खरै हुलाकीले बुझाएर गएको पोको खोलौँ या नखोलौँ भन्ने दुविधामा ऊ धेरैबेरसम्म रुमल्लिइरही । पोको हातमा लिएर वर्काई-फर्काई हेरी र तौली । पोको सानो र हलुको लाग्यो । एकापट्टि लोग्नेको नाउँ र ठेगाना प्रस्टसँग लेखिएको थियो ।अर्कापट्टि पठाउनेको ठेगाना लेखिएको र त्यो पनि छोटकरीमा भएकाले पठाउनेको पूरा नाम उसले बुझ्नै सकिन। उसलाई उत्सुकताभन्दा बढी जिज्ञासाले कुतकुत्यायो। जेसुकै होस् भन्दै टॉसिएका कागजहरू उप्काउन थाली।
चित्र फ्रेम गर्नुपर्दा
डा. जगत छेत्री
कलाकारहरू प्रायः नै भावुक हुन्छन्, सारै सेन्टिमेन्टल। त्यसैले उनीहरूसितको हरेक बातचीत वा व्यवहारमा खूब सचेत हुनुपर्छ र सावधानी राख्‍नुपर्छ। हुन पनि कलाकारहरूले समाजबाट अरू के पो पाएका छन् र ! सधैँ आर्थिक कमजोरी औ सामाजिक उपेक्षामा रहेका यी कलाकारहरूले प्रशंसाका दुई शब्द र सद्व्यवहारको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै छ।
कर्ण लम्पसार परेर ओछ्यानमा पल्टिरहेका थिए। उनको हाड र छाला भएको शरीर देख्दा कुनै दिन उनी खाइलाग्दा युवक प्रसिद्ध धावक भनेर पत्याउन गाह्रो पर्थ्यो। केही समय अघिसम्म कर्ण नेपालका प्रसिद्ध धावक तथा पुरस्कार विजेता थिए। बलिया, अग्ला, गोरो वर्णका, फरासिला कर्ण कटुवाल जीवनसँग लपक्क टाँसिएर त्यसको भोग गरिरहेका थिए। स्वास्थ्य, पैसा, साथीभाइ, प्रसिद्धि – सबै थियो उनको, अझ त्यसमा थपिएको थियो – शिक्षित, सुन्दर जीवनसङ्गिनी। प्रेमविवाहपछि पनि उनीहरूको प्रेम सेलाएन बरु जरा गाड्दै बलियो भएर त्यो सम्बन्धलाई थेगेको थियो।
केही वर्षपहिले भारतीय सिनेतारिका माधुरी दीक्षित काठमाडौँ आएकी थिइन्। उनले नेपाललाई भारतकै प्रान्त भनेर कतै प्रतिक्रिया दिएपछि नेपालमा ठूलै होहल्ला मच्चिएको थियो। माधुरी दीक्षितले खेलेका फिल्महरू बहिष्कार गर्नेसम्मको आन्दोलनको धम्की गयो। माधुरी दीक्षितले सायद कुनै सञ्चारमाध्यममार्फत माफी मागेर समस्यालाई सामसुम पारेकी थिइन्।
आकाशबाट घाम बर्सिरह्यो बिहानदेखि नै
एक बाल्टिन घाम थापेर
रातका लागि जोगाऊँ भनेको घाम आफैँ
‘उज्यालो खोज्नु छ
बस्नु हुन्न राति, कर्फ्यु छ’
भनेर बाल्टिनलाई छोडेर गयो
चिसो बाल्टिन, रित्तो बाल्टिन
उज्यालो थाप्ने रहर कठै…!
‘तपाईँ त घाटमा देखिनुभएन ?’ तिनीहरू प्रश्न गर्थे। ऊ बहाना बनाउँथ्यो। तिनीहरू उसका कुरा सुन्थे। उसले बहाना बनाउन छोडेको थिएन। तिनीहरू प्रश्न गर्न पछि परेका थिएनन्। त्यो चोट निको हुनुको सट्टा पश्चात्ताममा उक्लिएको थियो। यो कष्ट भोग्ने ऊमात्र थियो। उसको कष्ट कसैले देखेको थिएन। गल्ती थियो। निर्णय लियो, अबदेखि म कुनै पनि हालतमा गल्ती गर्दिनँ, यही समयमा दुर्घटनाको खबर आयो।
कम्पाउन्डको अग्रभागको एक टुक्रामा लहरै रोपिएका गुलाफका बोटहरूमा कैँचीले एकनाससित जथाभावी सुनाराजाले गुलाफका कोपिलायुक्त हाँगाहरू काटिरहेको हुन्छ।
‘हेर्नोस् त मिस ! हामीले यो फूलबारी कति राम्रोसँग गोड्यौँ।’ विनयले आफ्नो समूहका अरू तीनजना बालकसहित रमिलाको अगाडि गएर भन्यो।
‘ए, हो ? खोइ हेरूँ त !’ रमिला मिस बालगृहको प्राङ्गणमा रहेको फूलबारीनेर पुगिन् र भनिन् – ‘ओहो ! कस्तो राम्रो गोडेर सफा बनाएछौ ! कति राम्रो देखिएको छ।’